महत्वपूर्ण खेलमा रोयल च्यालेन्जर बेङ्ग्लोरको हार ! राजस्थान रोयल्स ३० रनले बिजयी - Hamro Nepal Cricket
हाम्रो नेपाल क्रीकेट ,काठमाडौं
बेङ्ग्लोर आइपिएलबाट बाहिर
आजको खेलमा ३० रनले पराजित भएसङ्गै रोयल च्यालेन्जर बेङ्ग्लोर आइपिएल २०१८ को यात्राबाट बाहिरिएको छ भने राजस्थान रोयल्सको सम्भावना कायमै रहेको छ।
ए बि डि भिल्लर्स र पार्थिब पटेल बाहेक अरु कुनै ब्याट्सम्यानको प्रदर्श्न राम्रो रहेन। भिल्लर्सले अर्धशतकिय पारी खेले भने पटेलले ३३ रन जोड्न सफल भए। ७५ रनमा एक विकेट गुमाएको बेङ्ग्लोरको ९८ रनमा छ विकेट गएको थियो।
यसअघि सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुरमा टस जितेर घरेलु मैदानमा पहिले व्याटिङ्ग गरेको राजस्थानले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाउँदै १६४ रन बनायो।
राजस्थानका लागि राहुल त्रिपाठीले नटआउट ८० रन बनाए। ५८ बल खेलेका उनले ५ चौका र ३ छक्का प्रहार गरे। कप्तान अजिक्य रहाणेले ३ चौकासहित ३३ र हेनरिच क्लासेनले ३ चौका र १ छक्कासहित ३२ रन जोडे। बलिङतर्फ उमेश यादवले ३ विकेट लिए।
यो जितसँगै राजस्थान रोयल्स १४ अंकको साथ अंक तालिकामा चौथो स्थानमा उक्लिएको छ । राजस्थानको प्ले अफ खेल्ने संम्भावना कायम नै छ । उता बेङ्लोर भने १४ खेलमा ६ जित र ८ हार सहित मात्र १२ अंक बटुल्दै अाईपिएलबाट अाउट भएको छ ।
सन्दिप लामिछानेले गरे उत्कृष्ट बलिङ्ग ! चार ओभरमा लिए तीन विकेट !